नेपाली समुदायको हितमा काम गर्छु -गंगाधर गौतम - चारदिशा
August 21, 2015 चारदिशा
गंगाधर गौतम, गैर आवासीय नेपाली संघ वेल्जियमका अध्यक्ष पदका उमेदवार । वागलुङ्गमा जन्मेर विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गरेका गौतम विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा सक्रियताका साथ लागिरहेका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ वेल्जियमका पूर्व उपाध्यक्ष र जन सम्पर्क समिति वेल्जियमका भुतपूर्व अध्यक्ष। प्रवासको राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक विषयमा अडान लिने नेताका रुपमा चिनिन्छन् गौतम। प्रस्तुत छ एनआरएन वेल्जियमको आगामि निर्वाचनको शेरोफेरोमा चारदिशा संवाददाता कुमार राउतले गरेको कुराकानी :-
० दुई वर्ष अगाडि पनि एनआरएको अध्यक्षमा चुनावमा पराजित हुनुभयो। यसपाली तपाईंले जित्नुहुन्छ भन्ने के आधार छ ?
– हामीले विगतबाट पाठ सिकेका छौं, अहिले जनसम्पर्क समिति एक भएको अवस्था छ । हामीले समावेशी प्यानल बनाएर एनआरएन बेल्जियमकोको नेतृत्व सर्वसम्मत होस् भन्ने पक्षमा छौं ।
० यसअघि किन पराजीत हुनुभएको हो समीक्षा गर्नुभयो ?
– मूल कारण त आन्तरिक विवाद नै थियो, त्यसको हामीले समीक्षा गरिसकेका छौं । अहिले त्यो अवस्था छैन, सम्पूर्ण एक भएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नेतिर हामी लागेका छौं ।
० सर्वसम्मतको कुरा के आधारले भन्दै हुनुहुन्छ ?
– बेल्जियममा रहेको सातवटा संगठनमध्ये ६ वटाले मेरो नेतृत्वमा रहेको समूहलाई समर्थन गरेकाले सर्वसम्मत हुने सम्भावना बढेको हो । एउटा मात्र संगठनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ । तर समय घर्किसकेको छैन, हामी सहमतिमै अघि बढौं भनेर गिभ एण्ड टेकबारे छलफल बहस गर्न सक्छौं । सबै पक्ष विन विनको अवस्थामा पुग्दा राम्रो हुन्छ ।
० सहमतिमा नआएको भनेर कुन संगठनलाई भन्न खोज्नुभएको ?
– नेकपा एमाले पार्टीप्रति आस्था राख्ने प्रवासी संगठन हो । नेपाल प्रवासी मञ्च (एनडिएफ) ले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने कुरा गरेको छ । सम्भवतः हामी सर्वसम्मततिर जाने प्रयास गछौं ।
० के मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ ?
– विशेष गरी हामीले दुईवटा कुरालाई फोकस गरेका छौं । डायसपोरामा रहेका नेपालीलाई एनआरएनमा अपनत्व होस् भन्ने चाहेका छौं भने अर्को हामीले नेपालको समृद्धिका लागि योगदान दिनुपर्छ । एनआरएन प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको साझा संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढेका छौं । यो संस्थामा अपन्त्व जगाउनका लागि हामीले केही काम गर्नुपर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासमा रहेर हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ । हामी त्यसका लागि विभिन्न परियोजना बनाएर अघि बढ्छौं ।
० सबै संगठनहरुको नेतृत्व तपाईंलाई नै दिनुपर्ने ?
– सबै संगठनको नेतृत्व मैले लिएको छैन, यसअघि नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको अध्यक्ष थिएँ, अहिले पूर्वअध्यक्ष हुँ, अहिले एनआरएनको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारी गर्दैछु, त्यसका लागि घरदैलो अभियानसमेत सुरु भएको छ, सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं । सवैलाई समेटेर लैजानको लागि सहमतिमा काम गर्न जहिले पनि तयार नै छु। त्यसको लागि अन्य संस्थाका साथिहरुको भावनालाई समेत समेटेर अगाडि वढ्नेछु।
० तपाईंलाई एनआरएनको नेतृत्वमा किन पुर्याउने ?
– मेरो व्यक्तिगत इच्छा मात्र होइन, यहाँका आम समुदायको माग हो, बेल्जियममा रहेका नेपाली समुदायबीच रहेको विवादलाई समाधान गरी अघि बढ्नसक्ने क्षमता मसँग छ । एनआरएनमा अपन्त्व जगाउने र सबै समुदायलाई मिलाएर अघि बढ्छु । राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छु, नयाँ र नेपाली समुदायको हितमा काम गर्छु । नेपाली समुदायको आवश्यकतालाई नेतृत्वमा रहेर अगाडि वढ्ने आँट र हिम्मत भएको र साथिहरुको भावनालाई समेत समेट्न सक्ने भएकोले नेतृत्व लिने चाहेको हूँ। यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभएर नेपाली समुदाय र समयको माग अनुसार नै भएको हो।
० जितेपछि के गर्नुहुन्छ ?
– अहिले नै यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्दिन, मैले आफ्नो चुनावी मुद्दा बेल्जियमवासी नेपाली समुदायबीचमा राखिसकेको छु । त्यसबाहेक बेल्जियममा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय यो पहिलो पुस्ता हो । यो पहिलो पुस्ता पनि दुई भागमा विभाजित छन् । स्थायी बसोबासको अनुमति पाइसकेका र पाउनेक्रममा रहेका नेपाली समुदाय हुनुहुन्छ । नेपाली समुदाय इमान्दार, अनुशासित र मेहनती भएकाले यहाँको सरकार नेपाली समुदायप्रति सकरात्मक छ । बेल्जियम सरकारको यो सकरात्मक सोचलाई हामीले क्याच गर्न सक्छौं । तर त्यसका लागि हामी नेपाली एक हुन आवश्यक छ ।
० कसरी क्याच गर्नुहुन्छ ?
– झण्डै सात हजारको हाराहारीमा नेपाली समुदाय छन् । त्यसमध्ये एक हजारले स्थायी बसोबासको अनुमति पाइसकेका छन् । छ हजार जति स्थायी अनुमति लिने प्रकृयामा छन् । नेपालीप्रति बेल्जियम सरकारको सकरात्मक सोचलाई संस्थागत गर्न सकियो भने स्थायी अनुमुति लिने प्रकृयामा रहनुभएका नेपाली समुदायलाई सजिलो हुनसक्छ । त्यो काम एनआरएनमार्फत् गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ ।
एन आर एन इटालीको नेतृत्व हाँक्न सक्षम छु । – उर्मिला थोकर